Dhagayso:- Xildhibaan waliba wuxuu jecel yahay inuu noqdo Wasiir “Maxay tahay sirta? Xildhibaan ayaa sharaxaya”.
December 30, 2018 marqaan 5
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo kamid ah xubnaha baarlamaanka oo ka hadlayay kulankii baarlamaanka ayaa soo jeediyay su’aalo loo baahan yahay in wasaaradda maaliyadda ay ka jawaabto. Xildhibaan Daahir Jeesow ayaa ugu horeyn sheegay in Soomaaliya
Xog:- Dowladda Somalia muddo laba bil ah malahan qof ugu magacaaban “taliyaha NISA” Maxaa loo magacaabi la’yahay? Waxbadan ogoow.
December 30, 2018 marqaan 17
Dowladda Federaalka Somalia ayaa ka meermeereysa soo magacaabida Taliyaha Hay’adda Nabad sugida iyo Sirdoonka qaranka maadaama ciidamada NISA ay yihiin awooda koowaad ee difaac ee ay ku xisaabtanto Dowladda dhexe. Xilkan ayaa waxaa iska casilay
Deg-deg:- Gaadhi laga soo buuxiyay walxaha Qarxa oo hadda lagu qabtay Magaalada Baydhaba.
Wararka degdega ee kusoo dhacaya Marqaannews isla markaana ka imaanaya Magaalada Baydhabo Ee xarunta gobolka bay ayaa waxaa ay sheegayaan in ciidamada ammaanka howlgal magaaladaasi ay ka fuliyeen lagu qabtay gaari walxa qarxa lagu rakibaye.
Top News:- Cabdiweli Gaas oo farta ku fiiqay musharax mudan in la doorto hadii uu isaga soo laaban waayo “Waa kuma musharaxaasi?”
Madaxweynaha Puntland, Dr Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa dareemaya culees badan oo kaga imaanaya musharaxiinta isbadal doonka ah ee ka qeyb galaya doorashada madaxtinimada Puntland. Madaxweyne Gaas oo dhowaan kusoo laabtay Garoowe ayaa la kulmay
Deg-deg Xog Hoose:- Gaadhi dagaal oo gaar u ahaa Coll.Caare ayaa lagu dhacay magaalada Qardho.
Kooxo hubaysan ayaa dhacay gaarigii gaarka ahaa ee Kornel Caare oo horay uga soo goostay ciidamada Somaliland, Gaariga Cornelka ayaa laga dhacay bartamaha Magaalada Qardho, ka horna dhicista gaaariga waxaa lays waydaarsaday rasaas tira badan